အဘ အလကားလုပ်ပါ့မလားကွဲ့ အပါအ၀င် ဟာသများစုစည်းမှု
မင်္ဂလာပါ ရာသက်ပန်ပရဟိတ၀ါသနာရှင်များအသင်းမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါတယ်၊ အသင်းဝင်ဖြစ်ပါက log in အားနှိပ်၍ ၀င်ရောက်ပါ၊ အသင်းဝင်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်လိုလျှင် Register အားနှိပ်ပါ။
မင်္ဂလာပါ '' ရာသက်ပန် '' ပရဟိတ ၀ါသနာရှင်များအသင်း မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါ၏
» Mobile video Sharing
Tue Sep 23, 2014 2:57 pm by သီဟစိုး
Tue Sep 23, 2014 1:52 pm by suesha
Sun Sep 14, 2014 8:55 pm by yarthetpan
» တရားတော်ဆိုင်ရာ ၀က်ဆိုဒ်များ
Sun Sep 14, 2014 8:51 pm by yarthetpan
» မျက်စိ ကျန်းမာရေးအတွက် ပြုလုပ်သင့်သည့် အချက် ၉ ချက်
Fri Sep 12, 2014 2:43 pm by soehtetkyaw
» Android ဖုန်းတွေက Password , Pattern Lock, တွေမေ့သွားရင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့ နည်း
Thu Sep 11, 2014 8:58 pm by aung nann winn
» ဝမ်းဗိုက်အဆီ လျော့ကျစေမည့်နည်း ၉ သွယ်
Thu Sep 11, 2014 6:38 pm by aung nann winn
» Viber ကို PC မှာ မြန်မာလိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Thu Sep 11, 2014 5:16 pm by aung nann winn
Thu Sep 11, 2014 4:27 pm by aung nann winn
ရာသက်ပန် ပရဟိတ၀ါသနာရှင်များအသင်း :: Your first category :: ဘ၀အမောတွေ ပြေစေဖို့အတွက် ဟာသလေးမျာမျှဝေကြရန်
by yarthetpan on Wed Aug 20, 2014 4:58 pm
-လေယာဉ် ပြတင်းပေါက်ဘေးမှာ ထိုင်၍ လိုက်ပါလာသူ ခရီးသည်တစ်ယောက်သည်
တရွေ့ရွေ့လျားနေကြသော တိမ်စိုင်တိမ်ခဲကြီးများကို ကြည့်ရင်း
အလွန်ကြည်နူးနေလေသည်။ ထိုစဉ် သူ့ပြတင်းပေါက်ရှေ့မှာ လေထီးသမားတစ်ဦးကို
`ဘယ်လိုလဲ၊ ကျွန်တော်နဲ့ လိုက်ခဲ့မလား´ဟုလှမ်းမေး၏။
`ကျေးဇူးပဲ၊ မလိုက်တော့ပါဘူး။ တိမ်တွေကို ခုလိုကြည့်နေရတာ သိပ်အရသာ ရှိတယ်´
`ကောင်းပါလေ့ဗျာ။ ကျွန်တော်က တခြား လူမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားစီးနေတဲ့
လေယာဉ်ပျံကြီးရဲ့ လေယာဉ်မှူးပါ။ ကဲသွားပြီ၊ တာ့တာ´
အဖေက ကျွန်တော့်ကို နိုက်ကလပ်တွေ မသွားဖို့၊ မလုံတလုံ ၀တ်ထားတဲ့
ဖက်ရှင်ရှိုးတွေ သွားမကြည့်ဖို့ အမြဲပြောတယ်။ အဖေ့စကားနားမထောင်ဘဲ
အဲဒီလို နေရာမျိုးတွေ သွားရင် မမြင်သင့်တာတွေ မြင်တတ်တယ်လို့ အဖေ
က ပြောပါတယ်။ အဖေက မသွားနဲ့ ပြောမှ တခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့ကျွန်တော်
သွားချင်လာမိတယ်။ တရက်မှာ အဖေမသိအောင် တိတ်တိတ်လေး လက်မှတ်
၀ယ်ပြီး ကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။ ၀င်ဝင်ချင်းပဲ မမြင်သင့်တာကို ကျွန်တော်မြင်
သွားတယ်။ ဘာမြင်ခဲ့လဲ သိလား...ကျွန်တော့် "အဖေ" ကိုလေ....
သူ့အား တောက်လျှောက် စိုက်ကြည့်နေလေသည်..
လူထွားကြီးအနားရောက်ခါနီးတွင် လူထွားကြီးမှာ သူ၏ဘေးရှိထိုင်ခုံအား
ကောက်ကိုင်ပြီး သူဆီသို့ ပြေးလာသည်..
ပါရဂူကြီးမှာလည်း ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲ ပြေးနိုင်မှလွတ်နိုင်မည်ဟုဆြို ပီး
လူထွားကြီးမှာ ပါရဂူအနားသို့ရောက်လာပြီး ဤသို့ပြောလိုက်လေသည်.
" ထိုင်ပါခင်ဗျား…ကျွန်တော်က ဧည့်ကြိုပါ" .. တဲ့
လူနာသုံးဦးကို အိမ်သာခွက်(၃)ခုတွင် တန်းစီစေပြီး
ငါးမျှားခိုင်းလေသည်.. ဆရာဝန်ကြီးမှာ လူနာ၏စိတ်အခြေအနေကို မေးလေသည်။
ဆရာဝန်.. " တပည့်. ငါးရရဲ့လား "
ပထမလူနာ…" အရူးရဲ့ တိုးတိုးပြော.. ဟိုမှာ ငါးပွက်နေပြီ..မမြင်ဘူးလား"
ဆရာဝန်…" တပည့်.. မင်းရော ငါးမျှားလို့ရလား.."
ဒုတိယလူနာ.." ဒီမှာ ဆွဲနေပြီ.. ဘေးဖယ် ငါးကကြီးတယ် "..
ဆရာဝန်…" တပည့်.. ငါးရရဲ့လား"
တတိယလူနာ.." ဟာခင်ဗျား ရူးနေလား… ဒီလိုနေရာမှာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး
ဆရာဝန်ကြီးမှာ တတိယလူနာကို ပုံမှန်စိတ်ဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်သဖြင့်..
သူငယ်ချင်း မင်းဘာကြောင့် ဒီကထွက်သွားရတာလဲကွာ
ဟိုလူငရူးပေါ့… ငါ့ကိုလာမေးတယ်.. ငါးရလားတဲ့..
ပြောပြလိုက်ရင် ဒီကောင် ငါ့နေရာကို လာမျှားမှာပေါ့ကွ…
လူငယ်တစ်စုတဲ့ မေမြို့ကို ပျော်ပွဲစားသွားကြသတဲ့။ သူတို့ထဲက တစ်ယောက်က မေမြို့မှာ ခြံနဲ့ အိမ်ပိုင် လေသည်။ သူတို့လည်းအဲဒါနဲ့ အဲဒီခြံမှာ တည်းကြတာပေါ့။ အဲဒီခြံထဲမှာ ခြံစောင့် အဘိုးကြီး တစ်ယောက်လည်း ရှိလေသည်။ ညနေရောက်တော့ သူတို့က အရက်သောက်ချင်လာကြတယ်လေ။ သွားဝယ်ရမှာကလည်းပျင်းတာနဲ့ အဘိုးကြီးကို ပိုက်ဆံပေးပြီး
‘အဘ ကျွန်တော်တို့ကို အရက်သွားဝယ်ပေးစမ်းပါ’
ဆိုပြီး လွတ်လိုက် ကြတယ်။ အဘိုးကြီးလည်း ခဏနေတော့ အရက်ပုလင်းလေးဝယ်ပြီး ပြန်လာလေသည်။ လူငယ်များသည်လည်း ပျော်ပျော် ပါးပါးနဲ့ အရက်သောက်ကြရာ တစ်လုံးကုန်သော်လည်း မမူးသဖြင့် ထပ်ဝယ်ခိုင်းလေသည်။ ထို့နောက် ထပ်သောက်ကြပြန်ရာ ထိုအခါလည်း မမူးပေ။ သို့နှင့် သူတို့လည်း မသင်္ကာတော့ သဖြင့် အဘိုးကြီး ကိုမေးကြသည်။
‘အဘကြီး ကျွန်တော်တို့ အရက်ကို သောက်ပြီး ရေရောများလာသလား’
‘ငါ့တူတို့ရယ် အဘကအလကား လုပ်ပါ့မလားကွဲ့’
‘ဒါဆိုလည်း ပြီးရောဗျာ ထပ်ဝယ်ချေဦး’
သူတို့ ထပ်သောက်ကြပြန်သည်။ ဒီတစ်ခါလည်း မမူးချေ။ အဘိုးကြီးကို ထပ်မေးကြပြန်သည်။
‘အဘ မလိမ်နဲ့ နော် အဘသောက်ပြီး ရေရောထားတယ်ထင်တယ်’
‘သြော် ငါ့တူတို့ရယ် အဘက အလကား လုပ်ပါ့မလားကွယ့်’
သို့နှင့် သူတို့ ထပ်ဝယ်ခိုင်းပြီး သောက် မမူး ထပ်မေး။ နောက်ဆုံးတော့ အဘိုးကြီးက
‘ငါတူတို့ရယ် အဘအလကား လုပ်ပါ့မလားကွဲ့’
ထိုပုံပြင်လေးကို ကြားရတော့ ကျွန်တော် အသံထွက်အောင်ပင် ရယ်မိပါသည်။ အဘိုးကြီးပြောသော အဘက အလကား လုပ်ပါ့မလား ဆိုသည်မှာ လည်း မှန်လေသည်။ သူလည်း အလကား မလုပ်နိုင် တန်ရာ တန်ဖိုးတော့ ယူရမည်ဟု ဆိုလိုသလားမသိ။ လူငယ်တွေကတော့ သူ့တို့ဟာသူတို့ တလွဲထင်နေပုံရသည်။
အဲဒီပုံပြင်ကို ဖတ်တုန်းက ဒီကောင်တွေတော့ ခံလိုက်ရပြီဟ ဆိုပြီး အားရပါးရရယ် မိသော်လည်း ကိုယ်ခံရတော့ မရယ်နိုင်တော့ပါ။ ဖြစ်ပုံက ဒီလို။
တစ်နေ့တော့ သူငယ်ချင်းများနှင့် ၀ိုင်းဖွဲ့ စကားပြောရင်း တစ်ယောက်ကပြောသည်။
‘ငါ့အတွက်တော့ကွာ စင်ကာပူနိုင်ငံကို တော်တော်ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါစင်ကာပူ လာလို့ ငါရော ငါ့မိသားစုရော လူလိုသူလိုနေရာတာ။ မဟုတ်ရင် စားဖို့သောက်ဖို့ တောင် အနိုင်နိုင်ကွာ။ ကျေးဇူးကြီးပါ ပေ့စင်ကာပူရာ’
သူပြောသည်မှာ သူ့အတွက်တော့ ရာနုန်းပြည့်မှန်လေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတုန်းက သူလုံးဝ အဆင်မပြေ။ ဘာလုပ်လုပ်ကို အဆင်မပြေ။ အကြွေးတွေတင်သည်။ ဒုက္ခတော်တော်ရောက်လေသည်။ အခုသူ စင်ကာပူရောက်မှ အတော်အတန်အဆင်ပြေပြီး အိမ်ကိုလည်း ငွေသိန်းဂဏန်းလစဉ်ပို့ နိုင်နေပြီဖြစ်သည်။
အတော်အတန်စဉ်းစားတတ်သော အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်က ၀င်ပြောလေသည်။
‘အာ မဟုတ်ဘူး။ အဲလိုတော့ မတွက်နဲ့ကွ။ ဒီကိုရောက်လို့ ငါတို့တွေ အဆင်ပြေတာတော့ ပြေတာပေါ့။ တကယ်တော့ ဒါက တစ်ဦးချင်းဆီသာ အဆင်ပြေတာကွ။ ငါတို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ အများကြီး ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီရောက်တဲ့ လူအများစုကို ကြည့်ကွာ။ လူငယ်ပညာတတ်လေးတွေ။ ပြောရရင် နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံရဲ့ အညွှန့် အဖူးလေးတွေကွ။ စင်ကာပူက အဲဒီ အညွှန့် အဖူးလေးတွေကို အဆင်သင့် ခူးစားနေ ရတာမောင်။ အဲဒီတော့ ငါတို့ နိုင်ငံ အတွက် ဘယ်လောက်များ နစ်နာသလဲ တွေးသာကြည့်တော့’
‘ခင်ဗျားအဲလိုထင်ရင်ဘာလို့ လာသေးတုံးဗျ။ ခင်ဗျားကို ဘယ်သူမှ မလာခိုင်းဘူး။ ခင်ဗျားသဘောနဲ့ ခင်ဗျား လာတာလေ။ အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုး မလုပ်နဲ့။’
သူတို့ နှစ်ယောက်ကတော့ ဆက်ငြင်းနေလသည်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်အတွေးနှင့် ကျွန်တော် နစ်မြောသွားလေသည်။
သူတို့ ပြောမှ ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားကြည့်မိသည်။ နှစ်ယောက်စလုံး ကိုယ့် အတွေးနဲ့ ကိုတော့ မှန်သည် ဟုထင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက စင်ကာပူ ကအညွှန့် အဖူးလေးတွေ ခူးစားပါစေဦး ထိုအညွှန့် အဖူးကလေးတွေကပင် ကျွန်တော်တို့ ကိုခူးစားပါ ကျွန်တော်တို့ ကို ခူးစားပါဟု တကြော်ကြော် တောင်းဆိုနေရလေသည်။ ကျွန်တော်တွေးရင်း တွေးရင်း လေးလေးပင်ပင် သက်ပြင်းချမိပါသည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံ အတွက်သာ ရင်လေးမိပါသည်။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်သူကမှ ရိုက်ပြီး မလာခိုင်း။ ကိုယ့်သဘောနှင့်ကိုသာ လာရခြင်းဖြစ်သည်။ အခြေအနေက တွန်းပို့လိုက်သည်ဟု လည်း ပြောနိုင်သည်။
အဲဒီညကတော့ အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်နေသည်။ အိပ်မက်ထဲမှာ ကျွန်တော် စင်ကာပူနိုင်ငံက ဘဘကြီး နှင့်တွေ့ သည်။ ကျွန်တော်က သူ့ကို ဒေါသတကြီး အော်နေလေသည်။
‘အဘကြီး ခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက အညွှန့် အဖူးတွေ ခူးစားနေတာ မဟုတ်လား’
ထိုအဘကြီးကတော့ ကျွန်တော် ဘယ်လောက်အော်အော် အပြုံးမပျက်ပဲ
‘သြော်ငါတူရယ် အဘကအလကား လုပ်ပါ့မလားကွဲ့’
Re: အဘ အလကားလုပ်ပါ့မလားကွဲ့ အပါအ၀င် ဟာသများစုစည်းမှု
by သီဟစိုး on Thu Sep 11, 2014 4:11 pm
နေရပ်လိပ်စာ : အောင်လံမြို့-မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
Jump to: Selectaforum||--Your first category |--ရာသက်ပန် ပရဟိတ အသင်း အသေးစိတ် အချက်အလက်များ |--ရာသက်ပန် ပရဟိတအသင်းနှင့်ပတ်သတ်သော ဝေဖန်အကြံပြုချက်များ |--ရာသက်ပန် ပရဟိတ အသင်း လှူဒါန်းမှုမှတ်တမ်းများ နှင့်ရှင်းလင်းချက်များ |--ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်များ | |--မြတ်ဗုဒ္ဓ ၏ အဆုံးအမများ | |--ကွန်ပျူတာနည်းပညာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုများ | |--ကွန်ပျူတာ အထွေထွေပြသနာများ | |--အင်တာနက်နှင့် ၀က်ဘ်ဆိုက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးချက်များ | |--အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာဆွေးနွေးခန်း | |--အင်္ဂလိပ် စကားပြောဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများ | |--Grammar ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများ | |--ဘ၀အမောတွေ ပြေစေဖို့အတွက် ဟာသလေးမျာမျှဝေကြရန် |--သုတ၊ ရသ စာပေများ | |--အထွေထွေ ဗဟုသုတများ | |--ကဗျာချစ်သူများအတွက် ကဗျာကဏ္ဍ | |--လွမ်းတတ်သူများအတွက် အလွမ်းကဗျာများ | |--ချစ်တက်သူများအတွက် အချစ်ကဗျာလေးများ | |--ဥာဏ်စမ်းပဟေဠိကဏ္ဍ |--ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ
Most users ever online was 40 on Wed Dec 27, 2017 7:00 am
မိန်းကလေးများ မဖတ်သင့်သော ဟာသများ
အသုံးဝင်မည့် အင်တာနက် website လိပ်စာများ
chat massage ဟာသလေးများ
အသင်း ဖွဲ့စည်းရခြင်းအကြောင်းနှင့် အသင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များ
ရာသက်ပန် ပရဟိတ အသင်း လှူဒါန်းမှုအစီအစဉ်များ